Part 1. ndabere iTunes music ka iTunes 12
Part 2. ndabere iTunes music ka iTunes egwuregwu
Part 3. ndabere iTunes music ka mpụga ike mbanye
Na ịrị elu na ọnụ ọgụgụ nke chinchi na obi malware, ndị mmadụ na-aghọ ndị ọzọ na-eche banyere-akwado ihe ọmụma ha echekwara na ha agagharị ngwaọrụ. iPhone ọrụ akpan akpan-achọta ya ike na-eme ndị dị mkpa backups ruru ka mmekọrịta usoro na-bụ akụkụ nke eji ihe ọ bụla Apple ngwaọrụ sitere na site laptọọpụ / desktọọpụ ngwaọrụ mbadamba na iPhones.
Ọ bụrụ na ị na a gwara na ọ dịghị ụzọ kwere omume nke na-eme a ndabere gị iTunes music, mgbe ahụ, Unu na-na chi, anyị na-aga isite n'otutu 3 ụzọ ndabere iTunes music, otú ị anọkwaghị na ize ndụ nke ịdapụ gị music collection.
Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị ụzọ nke akwado gị music na maka otu ihe ahụ ọ dị nnọọ mfe obibia dị ka mma. N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ nke pụrụ inyere gị na usoro.
Nzọụkwụ 1: anya isi na ị nwere ndị ọhụrụ iTunes arụnyere na gị na laptọọpụ / kọmputa nke desktọọpụ, Open Mmasị.
N'ihi na Mac Ọrụ: Họrọ iTunes Mmasị.
N'ihi na Windows Ọrụ: Họrọ Dezie Mmasị.
Nzọụkwụ 2: A New Ohere ga-adị, Pịa Advanced.
Nzọụkwụ 3: Odokwara checkbox sị, "Copy faịlụ ka iTunes Media nchekwa mgbe na-agbakwụnye na ọbá akwụkwọ" na-ahọrọ. Nke a na nhọrọ na-enyere n'iweta niile music jikọrọ gị iTunes ka otu otu ọnọdụ.
Ị ga-achọ ịmata na mgbe ịlele a nhọrọ, ị nwere ike ihichapụ music si mbụ ọnọdụ dị ka iTunes mere ka ya ndabere nke music.
Nzọụkwụ 4: Pịa OK, gị niile music bụ ugbu a na otu ebe na mma-na gị iTunes 12.
Ọ bụrụ na ị bụ ihe ọhụrụ nye Apple ma ọ bụ iTunes na ị na-adịghị ma n'aka banyere ihe kpọmkwem iTunes egwuregwu bụ mgbe ahụ ị ga-ahụ n'anya na-gụrụ akwụkwọ banyere ya. iTunes egwuregwu bụ a ojii nchekwa ọrụ, nke na-echekwa niile music n'elu ígwé ojii nchekwa na iTunes na-enye gị na ọ bụ mara mma dị mfe iji nweta.
iTunes egwuregwu-enyocha kwa gị music ọbá akwụkwọ songs na akwụkwọ ndenye ego nke collection dị na iTunes Store. Ọ bụla song na-adịkwa n'etiti music Ọbá akwụkwọ na iTunes ụlọ ahịa na-agbakwunyere na iCloud. Nke a-enye gị ohere iji nweta gị songs n'ebe ọ bụla na ihe ọ bụla apple ngwaọrụ dị ka ogologo oge ị na-jikọọ na internet.
Iji rụọ ọrụ iTunes egwuregwu, ị nwere gaba n'elu ka ntọala gị na iPad / iPhone na ngwaọrụ ma gbanye atụmatụ Site n'ebe ahụ, dị ka e gosiri na foto n'okpuru.
Nke a bụ nnọọ otu n'ime ndị kasị dịrị nchebe ụzọ nke na-edebe anyị backups na-ejide n'aka na a na-abughi emetụta malware ma ọ bụ site ọ bụla ngwaike ọdịda. Usoro a bụ n'ihu nke mbụ usoro "ndabere iTunes Music ka iTunes 12" n'ihi na ọ na-enyere aka ka ihe niile bụ data na otu ebe. Na Nzọụkwụ 2, nke mbụ usoro ị họrọ a ọnọdụ maka media nchekwa. Nanị onyeisi na ọnọdụ na idetuo "iTunes" nchekwa na mpụga ike mbanye.
Usoro a bụ mara mma dị mfe na-adaba adaba, Otú ọ dị, ọrụ ga-eburu n'uche na usoro a na-azọpụta ndị music ndepụta na na mpụga ike mbanye na ọ bụghị music faịlụ. Ọ bụrụ na-ịchọrọ ị nyefee music faịlụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-eji ndọtị software maara dị ka Wondershare.
Ndị na-esonụ foto na-egosi otú agafeta music faịlụ site na Wondershare na mpụga ike mbanye. Ozugbo ị jikọọ gị Apple ngwaọrụ ka PC, Wondershare achọpụta na ekwentị na ị nwere ike mfe mbupụ faịlụ site na-ahọpụta "Iji nchekwa" nhọrọ.
Ị ga na-eche ihe isi ihe dị iche n'etiti n'elu kwuru banyere ụzọ bụ na nke usoro bụ ihe kasị kwesị ekwesị na nke gị. Akwado gị music faịlụ ka iTunes 12 bụ a pụtara ezi obibia ma ọ bụrụ na i ji n'aka na gị na laptọọpụ / Desktọpụ ngwaọrụ bụ pụrụ ịdabere na ọ bụrụ na ị elu maka ize ndụ nke software ma ọ bụ ngwaike ọdịda. Ụfọdụ ndị pụrụ isiri ya ike na-ha music on ha obodo ike draịva n'ihi amachaghị nchekwa mbipụta, ebe nke abụọ usoro nke na-akpakọba na music on iTunes egwuregwu na-abịa n'ime ụka. Ọ bụ a mma obibia ka tụnyere mbụ usoro, nanị nsogbu na nke a bụ na àgwà nke music faịlụ a rụrụ arụ otu ugboro uploaded ígwé ojii na ọ bụkwa na a kọrọ na ọtụtụ n'ime faịlụ site na music n'ọbá akwụkwọ na-adịghị n'ụzọ kwesịrị ekwesị kpọfere ígwé ojii n'ihi na nke mismatch.
Nke a na-eweta anyị nke atọ usoro, nke bụ ihe kasị pụrụ ịdabere na ala ụzọ nke na-aga banyere gị music azụ elu. Ụlọ ahịa, na music na mpụga mbanye na ị ga-adị ọzọ nchegbu banyere adịkwa gị music collection mgbe!
Atụmatụ na iji Download Soundcloud Songs Music (ụzọ dị iche iche na foto)
Top 10 Guitar Ibé akwụkwọ Sites
Olee otú Download Amazon Music mfe na Kpamkpam
> Resource> Music> 3 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara iTunes Music